HomeChampions LeagueDani Alves Oo Loo Haysto Debaal Degii Uu Sameeyey Habeenkii City
Waxaa soo baxaya wararka sheegaya in dabaal dagii uu sameeyay ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara kooxda Bracelona Daniel Alves markii uu dhaliyay goolka labaad ee kooxdiisu kaga adkaatay kulankii Man City uu sabab u noqon doono inuu ka dhaqaaqo gegida Cam Nou oo uu meel kale raadsado.
Wargayska AS ee ka soo baxa caasimada Spain ee Madrid ayaa qoray suurto galnimda uu Daniel Alves kaga tagi karo kooxda Barcelona dhamaadka xili ciyaareedkan kadib dabaal dagii uu sameeyay kulankii ay 2-1 kaga adkaadeen Man City.
Wargayska ayaa sheegaya in laacibkan uu khilaaf ka dhexeeyo maamulka kooxda sidoo kale wuxuu sheegay in ciyaaryahanada ay isku kooxda yihiin iyo taageerayaashuba aanay soo dhawaynin dabaal dagii uu sameeyay iyo hadaladi uu u adeegsaday taageerayaasha kadib goolkaas uu dhaliyay.
Daniel Alves ayaa ka xumaa eedaha ay taageerayaasha kooxdu u soo jeedinayeen ciyaartoyda kadib guul daradii kasoo gaadhay Valladolid, sidoo kale Alves ayaa hore u sheegay in taageerihii aan ku qanacsanayn ay u furan tahay inuu iska joogo gurigiisa.
Heshiiska Daniel Alves kula joogo kooxda Barcelona ayaa dhamaanaya bisha June 2015-ka. waxaanu wargeyska AS ku doodayaa in kooxdu ay iibin doonto dhamaadka xili ciyaareedkan intii uu isagoo xor ah ka tagi lahaa xili ciyaareedka danbe.
Ronaldo Oo $ 83,000 Ugu Deeqay Qaliinka Ilmo Yar
Ronaldinho Oo Musalafay Gurigiisiina Ku Kireeyey £9,000 Habeenkii
Gregory Mertens Oo Geeriyoodey